Noocyada kabaha isboorti-News-Ningbo Kingbo International Trade Co., Ltd.
Noocyada kabaha isboorti
Inta badan cilmi-baaristii ugu dambeysay ee kabaha isboortiga waxay diiradda saartay horumarinta iyo hagaajinta kabaha orodka. Kabaha socda ayaa loo qaybiyaa saddex qaybood:
Shoes Kabaha la jiido ama kuwa "dhexdhexaadka ah" waxaa loogu talagalay orodyahanada leh lugo dhaadheer oo adag, dhexda kabaha orodka leh waxay guud ahaan yeelan doonaan hal midab oo ah waxyaabaha xumbo jilicsan, EVA, ee qaanso iyo cirib. waxay leedahay sifooyin cufan oo kala duwan si ay u siiso barkimo kabadan ama kayar.
Shoes Kabaha xasiloonida waxay siinayaan xasillooni fudud ama dhexdhexaad ah shaqsiyaadka leh qaanso soo duuli karta inta ay socdaan. Nooca lugta ee loo yaqaan 'polyurethane material' wuxuu kabaha ka dhigi doonaa mid aad uga culus mid ka badan kabaha lagu sameeyay EVA.
Shoes Kabaha xakameynta dhaqdhaqaaqa waxaa loogu talagalay orodka orodyahannada ah “pronators daran.” Xakamaynta dhaqdhaqaaqa ayaa ah kabaha orodka ugu xasilloon, waana kabaha xulashada kuwa orodka leh ee leh cago siman, iyo kuwa leh culeys culeys culus oo jirka ah. Qalabka xasilinta ee dheeriga ah ee lagu daro geeska gudaha ciribta si loo helo kontaroolka ugu sarreeya. Kabaha sare ee kabaha ordaya waxaa laga samayn doonaa caag kaarbo ama caag, kaasoo lagu sameeyay hawo la isku duro.
Kabaha tababbarka iskutallaabta ah waxaa loogu talagalay inay kaa qaaddo isboorti ilaa isboorti oo leh hal kabo. Kabaha noocan ah kuma haboona qof qorsheynaya inuu ordo wax ka badan afar ilaa shan mayl maalintii. Tababaraha tababbarka badanaa waxaa laga sameeyaa isku darka ee qalabka mesh iyo xargaha maqaarka ee dharka. Haddii kabaha uu leeyahay lug "socod" oo keligiis ah, way adkaan kartaa in lagu xidho kabaha maxkamada dhexdeeda jimicsi ama ciyaar.
Shoe Kabo lagu socdo
Kabaha socodka waxay ku siinayaan xasillooni qaanso, soo nuugid shoog wanaagsan, iyo tuman siman. Socodka wuxuu ku lugleeyahay hannaan socodka cagaha, sidaas darteed waxaad dooneysaa inaad hubiso in kabaha, iyo gaar ahaan miiska, ay deggan yihiin. qaanso cagtaada, waxaad ka faa'iideysan kartaa dhagaxa dhagaxa oo dhiirrigeliya duubista dabiiciga ah ee cagta intaad socoto.
Sho Kabaha Maxkamada
Kabaha maxkamada waxaa ka mid ah kuwa loogu talagalay kubbadda koleyga, tennis, iyo kubbadda laliska. Kabaha Courtku waxay leeyihiin tug adag oo caadi ahaan ka samaysan maqaar jilicsan. sare sare Waxaa sida caadiga ah laga helaa kabaha kubbadda koleyga si loo siiyo xasillooni kordhinta canqowga inta lagu guda jiro boodada iyo degitaanka.
Ciyaaraha badan, sida kubbadda cagta, lacrosse, kubbadda cagta iyo baseball-ka, waxay u baahan yihiin ciyaartooygu inuu xirto kabo dheelitiran. Kuwa la shaqaaluhu leeyihiin waxay leeyihiin dhowr wejiyood oo ka sameysan bir ama bir adag.
Kabaha socodku waxay u baahan yihiin inay bixiyaan xasilooni markaad ku dhex socotid dusha sare, iyo sidoo kale raaxada iyo barkinta kaligeed si ay uga soo nuugto naxdinta saameynta kala duwan. sagxadaha aad la kulantid. Kabaha ciriiriga leh waxay leeyihiin meel sare, iyagoo bixiya xasilloonida canqowga.
Kabo Ciyaaraha Kale
Waxaa jira kabo loogu talagalay isboorti kasta, oo ay ku jiraan golf, baloolaf, barafka,
xeegada, baaskiil wadista, iyo barafka Sida had iyo jeer, xirfadle ayaa kaa caawin kara inaad iibsato
kabaha kuugu fiican adiga iyo isboorti aad jeceshahay.